Disco Raja (2020) | MM Movie Store
Action Bollywood Sci-Fi
၀ူဟနျကာကှယျဖို့အတှကျ အိမျမှာနရေငျးပငျြးနကွေတဲ့ အိန်ဒိယကားပရိတျသတျတှအေတှကျ ယနေ့ တငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ အသဈစကျစကျ ဇာတျကားလေးပါ။ အိန်ဒိယဇာတျကားတှထေဲမှာ အကွိုကျတှမေိ့တဲ့ဇာတျကား နညျးနပေမေယျ့ ပရိတျသတျကွိုကျမယျထငျတဲ့ ဇာတျကားတှကေို ရှေးထုတျ တငျဆကျပေးနတောမို့….
ကောငျးသညျ မကောငျးသညျကို ယတိပွတျ မပွောလိုပါဘူး။ကိုယျ့အကွိုကျနဲ့ကိုကျညီရငျ ကောငျးပွီး ကိုယျ့အကွိုကျနဲ့ မကိုကျညီရငျ မကောငျးဘူးလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ဒီဇာတျကားကတော့ တောငျပိုငျးကားတှရေဲ့ ထုံးစံအတိုငျး အိုဗာအကျရှငျတှေ ဘာတှေ ဖောဖောသီသီ ပါဝငျသလို နညျးနညျးလညျး စိတျကူးယဉျလညျး ဆနျပါတယျ။
Bloodshot ဆိုတဲ့ ဟောလိဝုဒျဇာတျကားနဲ့တောငျ အစပိုငျးမှာ ခပျဆငျဆငျ ရိုကျကူးထားတာပါ။အကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့ ပွောရရငျ မငျးသားဟာ ဇာတျလမျးစစခငျြးမှာသသှေားတယျ။သိပ်ပံပညာရှငျတဈစုက မငျးသားကို သိပ်ပံနညျးနဲ့ သရှောကနေ ပွနျချေါတယျပေါ့။
ဒီနောကျတော့ သူဟာသူ့အတိတျကို လိုကျစုံစမျးရငျး ရိုးရိုးသတော မဟုတျပဲအသတျခံလိုကျရတယျဆိုတာကို သိသှားတော့ သူ့ကို သတျခဲ့တဲ့သူကို လိုကျလံရှာဖှေ သတျဖွတျမယျပေါ့။
ဇာတျလမျးက ဒီလောကျပဲ ဆိုပမေယျ့ ဒီကားကတော့ ဟိုးလှနျခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ ခုနှဈတှကေို အခွတေညျပွီး လမျးသရဲခတျေဒဈစကိုဂီတ ခတျေစားခဲ့ခြိနျတှအေတိုငျး ရိုကျကူးထားခဲ့တာမို့ အစကနေ အဆုံးအထိ ခပျမွူးမွူးလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျသှားပါတယျ။
ကလို့ ၊ ခုနျလို့ ကောငျးတဲ့ သီခငျြးလေးတှေ ပါတယျ။ မိသားစုနဲ့အတူ ကွညျ့လို့ရတယျ။အရမျးကွီးကောငျးတယျလို့ မညှနျးခငျြပမေယျ့ ကွညျ့ပြျောရှုပြျောရှိပါတယျ။ (ဟောလိဝုဒျကားနဲ့တော့ ယှဉျလို့မရဘူးပေါ့ ခငျဗြာ)
ကဲ… တောငျပိုငျးကားအထှကျနညျးတာမို့ ကောငျးနိုးရာရာကို တငျဆကျပေးလိုကျပွီ။အိမျထဲမှာ ဇာတျကားကွညျ့ရငျး ၀ူဟနျကို ကာကှယျကွပါစို့။
၀ူဟန်ကာကွယ်ဖို့အတွက် အိမ်မှာနေရင်းပျင်းနေကြတဲ့ အိန္ဒိယကားပရိတ်သတ်တွေအတွက် ယနေ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ အသစ်စက်စက် ဇာတ်ကားလေးပါ။ အိန္ဒိယဇာတ်ကားတွေထဲမှာ အကြိုက်တွေ့မိတဲ့ဇာတ်ကား နည်းနေပေမယ့် ပရိတ်သတ်ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးထုတ် တင်ဆက်ပေးနေတာမို့….
ကောင်းသည် မကောင်းသည်ကို ယတိပြတ် မပြောလိုပါဘူး။ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီရင် ကောင်းပြီး ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ မကိုက်ညီရင် မကောင်းဘူးလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ဒီဇာတ်ကားကတော့ တောင်ပိုင်းကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အိုဗာအက်ရှင်တွေ ဘာတွေ ဖောဖောသီသီ ပါဝင်သလို နည်းနည်းလည်း စိတ်ကူးယဉ်လည်း ဆန်ပါတယ်။
Bloodshot ဆိုတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားနဲ့တောင် အစပိုင်းမှာ ခပ်ဆင်ဆင် ရိုက်ကူးထားတာပါ။အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ပြောရရင် မင်းသားဟာ ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာသေသွားတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တစ်စုက မင်းသားကို သိပ္ပံနည်းနဲ့ သေရွာကနေ ပြန်ခေါ်တယ်ပေါ့။
ဒီနောက်တော့ သူဟာသူ့အတိတ်ကို လိုက်စုံစမ်းရင်း ရိုးရိုးသေတာ မဟုတ်ပဲအသတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကို သိသွားတော့ သူ့ကို သတ်ခဲ့တဲ့သူကို လိုက်လံရှာဖွေ သတ်ဖြတ်မယ်ပေါ့။
ဇာတ်လမ်းက ဒီလောက်ပဲ ဆိုပေမယ့် ဒီကားကတော့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေကို အခြေတည်ပြီး လမ်းသရဲခေတ်ဒစ်စကိုဂီတ ခေတ်စားခဲ့ချိန်တွေအတိုင်း ရိုက်ကူးထားခဲ့တာမို့ အစကနေ အဆုံးအထိ ခပ်မြူးမြူးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်သွားပါတယ်။
ကလို့ ၊ ခုန်လို့ ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့အတူ ကြည့်လို့ရတယ်။အရမ်းကြီးကောင်းတယ်လို့ မညွှန်းချင်ပေမယ့် ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိပါတယ်။ (ဟောလိဝုဒ်ကားနဲ့တော့ ယှဉ်လို့မရဘူးပေါ့ ခင်ဗျာ)
ကဲ… တောင်ပိုင်းကားအထွက်နည်းတာမို့ ကောင်းနိုးရာရာကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ။အိမ်ထဲမှာ ဇာတ်ကားကြည့်ရင်း ၀ူဟန်ကို ကာကွယ်ကြပါစို့။
Mr. Robot (Season 1) အပိုငျး (၈)